Horumarku Go’aan Iyo Geesinimo Ayuu U Baahday | Hubaal Media
Guriga FAALLOOYIN Horumarku Go’aan Iyo Geesinimo Ayuu U Baahday
Faallo: Cumar Maxamed Faarax
Inaad wax qabataa waxay ku xidhan tahay inaad qalbiga adkaysato, isla markaana aad ku dhiirato agaasinka hawsha aad maanka ku hayso, isla markaana aad ugu horreyn aaminto inaad guulaysanayso.
Waxa kaloo daruuri ah in dhinacyada aad hawlwadaagta tihiin eeku kaalinaya aad ku qanciso sidaad ugu niyadsan tahay inay najixi doonto hawsha aad wadaan, ama ugu yaraan ay kaa arkaan inaad u heellan tahay in hore loo socdo.
Sidoo kale, Kooxaha ay suurtowdo inay caaridaan bartilmaameedkaaga, waa in aanay kaa lumim dariiqa aad hayso. Sidaas si la mid ah waa inaad furfurtaa carqaladaha jira oo aad isku daydaa inaad ka gudubto, iyagoo qaarkood kuu noqon kara fursado hor leh oo kaa saacidi kara kara yoolkaaga.
Waxa suurtogal ah in caqabadaha kula gudboonaadaa ay noqdaan qaar maalinba qaar Sebbenku Suuliyo, oo aakhirka isku beddela kuwo ku siiya wakhti aad isku muujin karto iyo qaar safkaaga ku soo biira oo guushaada wax ku yeesha mustaqbalka.
Murtidu waxay tahay in aanad noqon “Canaan ka yaab reer ma doojo”,oo aad ku dhiirrato in hawlaha masiiriga ah aanay kaa dhicisaynin bini’aadamka oo sidooda bilowga aan qaabilin wiixii isbeddel ah ee noloshooda iyo ta deegaankoodaba ku soo kordha.
Jamhuuriyadda Somaliland fikir dheer iyo cadow badan oo dibadeed oo jiray kadib, waxay Xukuumaddu ku guulaysatay inay marsadda Berbera u hesho maalgashi caalamiya oo lagu casriyeynayo dekeddaas oo lagu wado inay noqoto xuddunta marin ganacsiyeedka ugu muhiimsan dalalka mandaqada.
Hase ahaatee xilligaas oo toddoba sannadood laga joogo, waxa dalka ka kacay darruuro mucaaridad ah oo lagaga soo horjeeday in mashruucaasi taabogalo, waxana la kiciyey dadweynaha iyo bulshada gobolka Saaxil oo laga dhaadhiciyey in dekedda la iibiyey. Sidoo kale, waxa ka soo horyimid siyaasiyiin badan oo u arkayey maalgashiga dekedda Berbera in la dhaxal wareejiyey Dawladnimada Somaliland. Maalmahaas haddii Xukuumaddii Axmed Siilaanyo aanay u babac dhigin duufaankii siyaasadeed ee aloosmay, maanta marsada Berbera may soo gaadheen heerka ay taagan tahay. Mana jiro maanta qof reer Somaliland ah oo ka soo horjeeda casriyeynta ay shirkadda DP World ku ballaadhinayso dekedda Berbera oo sannadkii rogi doonta 1 milyan oo Kontiinar.
Waxa shalay Madaxweynaha JSL xadhiga ka jiray dhismaha iyo dayactir ballaadhan oo lagu sameeyey madaarka caalamiga ah ee Berbera oo ah ka labaad ee ugu dheer garoomada diyaaradaha Afrika oo dhererkiisu 4Km iyo 100mitir,Waxa dhismaha madaarkaas innaga taageertay Dawladda Imaaraadka carabta oo noqotay saaxiib inoo dhashay oo JSL garab istaagtay xilli adag oo aynaan weli haysan aqoonsi, ayey ku dhiiratay inay innaga jabiso derbigii adkaa ee innaga xidhnaa kasbashada maalgashiga dibadda.
Madaxweyne Muuse Biixi wuxuu ku ammaanay Dawladda Imaaraadka carabta gacanta walaalnimo ee ay inoo fidisay, waxaanu caddeeyey in siyaasadda Arrimaha dibadda Somaliland salka ku hayso inaynu dal kasta lagula macaamilo wixii aynu ka aragno. Waxaanu balanqaaday in aanay iloobi doonin abaalka Imaaraadka Carabta.
Ugu dambayn, waxaan ku soo gabogabaynayaa in aynaan ka hor iman mashaariicda horumarineed ee dalka ka socda, si mustaqbalka aanay innoogu dhicin shaambad la mid ah, tii ku dhacday dadkii horumar diidka ahaa ee ka hor yimid maalgashiga dekedda Berbera oo qaarkood xiligaas ay isku mowqif noqdeen aragtidii cadowgu ka qabay, kuwaasi oo xiligan aaminsan in la mahadiyey mashruucii ay naqdiyayeen.
Article horeMurashax Cirro Oo Si Kulul Uga Jawaabay Eedaymo Madaxweyne Biixi U Jeediyey
Article soo socdaTaboboar loo Furay Xoghoyayaasha Dawladaha Hoose Ee Dalka